We Fight We Win. -- " More than Media ": ဦးနု အမှားမျိုး ထပ်မမှားမိဖို့ 
ဦးနု အမှားမျိုး ထပ်မမှားမိဖို့ 
အမေရိကန် သမတ တဦးမြန်မာ ပြည်ကို သွားရောက်လည်တာဟာ အေဒီ ၁၀၄၄ ခုနစ် ပထမ မြန်မာနိင်ငံကိုစတင်တည်ထောင်ကတ
ည်းက ဒါဟာ မြန်မာသမိုင်းမှာ ဒါဟာပထမဆုံးဖြစ်ပါတယ်။
သမိုင်းအဆက်ဆက် မြန်မာနိင်ငံရေး အခွင့်ထူးခံ များ (Myanmar Elite ) များက အမေရိကန် ဆိုတာ သူရဲသဘက်တကောင်လုို ၊ ဂုတ်သွေးစုတ် အရင်းရှင် နယ်ချဲ့ များသဖွယ် လူထုကို အဆက်မပြတ် မှိုင်းတိုက်ခဲ့ကြတယ်။ သို့ ရာတွင် အဆိုပါ အုပ်စိုးသူများ သူတို့ သားသမီးများဟာအမေရိကန် နိင်ငံမှာ အခွင့်အရေးများ ရယူခဲ့ကြပါတယ်။
လူထုတွေကိုတော့အမေရိကန် မကောင်းကြောင်းပြောပြီး သူတို့ ကကြတော့
အမေရိကန် ကိုသွားကြတာဟာ မကောင်းပါ။
အမေရိကန် နိင်ငံဟာ Perfect Nation မဟုတ်ပါ။ ခြောက်ပြစ်ကင်းသဲလင်းစင်နိင်ငံေ တာ့မဟုတ်ပါ။ ဒါပေမဲ့
ကမ္ဘာပေါ်မှာအမေရိကန် ဟာ မြန်မာ လူမျိုးတွေအတွက် အကူညီဆုံးနိင်ငံ
ဖြစ်နေတယ်။ အမေရိကန် ဟာ နိင်ငံရေး၊စီးပွားရေး၊ပညားရေး နဲ့ အနုပညာ
ကျနော်တို့ လေ့လာစရာတွေမကုန်နိင်အောင်ရှိ နေတဲ့နိင်ငံကြီးတခုဖြစ်ပါတယ်။
၁၉ ၈၈ ခုနစ်အရေးတော်ပုံကြီး ပြီးနောက်ပိုင်း ၈၈ ကျောင်းသားများရဲ့ ကျေးဇူးကြောင့် ဆင်းရဲသားလူတန်းစားပေါင်းစုံ တို့ ဟာ အမေရိကန် နိင်ငံကိုဒုက္ခသည်အဖြစ်ပြောင်း ရွှေ့ နေထိုင်ခွင့်ရခဲ့ကြပြီး ကောင်းမွန် တဲ့ဘ၀တွေကိုတည်ဆောက်ခွင့်ကမ္ဘာကြီးရဲ့ အပြောင်းလဲတွေကို မြင်ခွင့်လေ့လာခွင့်ရရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
အမေရိကန် သမတအိုဘားမားကိုလှည်းနေလှေအော င်းမြင်းဇောင်းပါမကျန်
အမေရိကန် သမတ မြန်မာပြည်ကိုသွားတာဟာ အစိုးရအတွက်ရော
၁၉ ၅၀ ၉၀န်းကျင်က အမေရိကန်
ဒုတိယသမတ နစ်ဆင်မြန်မာပြည်ကို လာလည်ခဲ့ဘူးတယ်။ တရုပ်နီအစိုးရ ( ကွန်မြူနစ် China ) အာဏာရသွားတဲ့အခါမှာ တရုပ်ဖြူ ( ဒီမိုကရက် Taiwan ) တွေကို
အကူညီပေးခြင်တယ်။ တရုပ်ဖြူက မြန်မာနယ်ထဲကိုတပ်ဆုတ်လာတယ်။
မြန်မာကိုခြေကုတ်ယူပြီး တရုပ်ဖြူကို ပြန်တိုက်နိင်ဖို့ လိုတယ်လို့ အမေရိကန်
ခေါင်းဆောင်တွေစဉ်းစားတယ်။ အပြန်အလှန်အားဖြင့်အမေရိကန် က
မြန်မာ ပြည်ကကိုနည်းပညာနဲ့ ကုန်သွယ်ရေးအခွင့်အလန်းတွေကူညီမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ ဒါကို နစ်ဆင်ကဦးနုကိုလာဆွေးနွေးတြာ ဖစ်ပါတယ်။ ဒါကို ဦးနုက
တရုပ်နီ ကို မျက်နှာသာပေးခဲ့တယ်။ အမေရိကန်ရဲ့ကမ်းလှမ်းချက်ကိုပယ်ချခဲ့တယ်။ အမေရိကန် က ထိုင်းဖက်ကို လှည့်သွားခဲ့တယ်။ ထိုင်းကလက်ခံခဲ့တယ်။ ထိုင်းက အမေရိကန် နဲ့ဆက်ဆံရေးပိုနီးစပ်သွားတယ်။
တရုပ်နီကိုပိုအားကိုးတဲ့ ဦးနုအစိုးရကို အမေရိကန် က ပညာပေးခဲ့ပါတယ်။
ဒါကတော့ မြန်မာ ပြည်က အမေရိကန်ဈေးကွက်မှာ တင်ပို့ နေတဲ့ဆန်တွေကို ရပ်ဆိုင်းလိုက်တယ်။ ထိုင်းကို ပေးလိုက်ပါတယ်။
ကနေ့ ကျနော်တုို့ အမေရိကန် ဆန်ဈေးကွက်မှာထိုင်းဆန်ကဘယ်လောက်လွမ်းမိုးထားသလဲဆိုတာ
၁၉ ၄၂ ခုနစ်လောက်ကတည်း မြန်မာဆန်ဟာ အမေရိကန် ဈေးကွက်ုိုလွမ်မိုးထားခဲ့တာပါ ။ အမေရိကန် ဆန်ဈေးကွက်ကနေ မြန်မာ ရောင်းချခွင့်မရခဲ့တဲ့အတွက်ထိုင်းနိင်ငံက အကျိုးရှိသွားတာဖြစ်ပါတယ်။
ဦးနုဒီလိုဘာကြောင့်ဆုံးဖြတ် သလဲ အဖြေကရှင်းတယ်။ မြန်မာခေါင်းဆောင်ေ တွက Idealism သိပ်ဖြစ်လွန်းတယ်။ မြန်မာခေါင်းဆောင်တွေက တရုပ်နဲ့တွေရင် သမိုင်းတူတယ်။ ယဉ်ကျေးမှုတူတယ်နဲ့အမျိုးစပ်လေ့ရှိတယ်။
လူဖြူတွေကို မုန်းကြတယ်။ တကယ်က ဒီခေါင်းဆောင်တွေမှာ စိတ်ပညာအရပြောရရင် သိပ်ငယ်စိတ်ဝင်တာပါ။ (Inferiority Complex )
လူဖြူကြောက်ရောဂါ ၀င်နေတာပါ။ ဒီကြောက်စိတ်ကို သူတို့ က အမျိုးသားရေးဆိုတာနဲ့ဖုံးကွယ်တာပါ။ မြန်မာ အီလိဒ် တွေမှာ ဒီကြောက်စိတ်ရှိတယ်။ လူထုမှာမရှိဘူး။
ဦးနုဟာ အာဏာလမ်းကြောင်းကနေ အဆုံးသတ်သွားရတာဟာ
ဦးနေ၀င်းအာဏာသိမ်းလို့လို့ ယျေဘူယျပြောလုို့ရတယ်။
ဒါပေမဲ့ ဦးနုနိင်ငံရေးအာဏာက နိဂုံးချုပ်ရတာဟာ ၁၉ ၅၀ ၀န်းကျင်က အမေရိကန် ဒုတိယသမတ မြန်မာပြည်လာစဉ်က မဟာမိတ်ကောင်းမွန်စွာ
မဖွဲ့ စည်းနိင်လိုက်တာဟာအဓိကအမှားဖြ စ်တယ်။
(အရောင်းအ၀ယ်- Trade )
အခု အိုဘားမားပြန်မာပြည်လာတာဟာ နှစ်ဦးနှစ်ဖက် လိုခြင်တာတွေရှိနေပါတယ်။
အမေရိကန် က မြန်မာပြည်က ဘာကိုလိုခြင်သလဲ
မြန်မာက အမေရိကန် စီက ဘာလုိုခြင်သလဲ ။
လိုခြင်တာကို Trade လုပ်ရမဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။
အမေရိကန်တွေက မြန်မာ အစိုးရဆီကလိုခြင်တဲ့အရာက
၂၀၀၈ အခြေခံဥပဒေပြောင်းဖို့ ၊ ဒေါ်စုကိုအာဏာလွဲဖို့ မလွဲဖို့ မဟုတ်ပါဘူး။
အနည်းဆုံးသူတို့ လိုခြင်တာက Social Justice ၊ Social Equality and Social Responsible ဖြစ်ပါတယ်။
ဦးသိန်းစိန်က ဘာလိုခြင်သလဲ။ သူဘဲသိမယ်။ ဦးသိန်းစိန်အကြံပေးတွေကရောဘာလိုခြင်သလဲ။
(Fake or Authentic)
ဦးသိန်းစိန် ဟာ ဒီအချိန်ဟာ အကောင်းဆုံး လုပ်ပြဖို့ အချိန်ဖြစ်တယ်။
လောလောဆယ်မှာတော့ အိုဘားမားလာတာဟာ ဒီနေ့မြန်မာပြည်ဟာ အပြောင်းလဲတွေဟာ တကယ်လား၊ ဟန်ဆောင်နေတာလား။ အစစ်လား၊အတုလားဆိုတာကို လာကြည့်တာပါ။ တပိုင်းမှာလဲ ဦးသိန်းစိန် အစုိုးရအနေနဲ့လွန်ခဲ့တဲ့ ၁နှစ်လောက်က အပြောင်းလဲတွေကို အမှတ်ပေးတဲ့သဘောလဲရှိပါတယ်။
လောလောဆယ်မှာတော့ အမေရိကန်သမတာ ဟာသင်္ကာမကင်ဖြစ်နေပုံရသေးတယ်။
တစ်။ နေပြည်တော်ကိုမသွားတာ။ ရန်ကုန် မှာပဲနေပြီး နေခြင်းပြန်တာ။
နှစ်။ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှာ သွားပြီးစကားပြောတာ။ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ဆိုတာက တော်လှန်းရေးတို့ ရဲ့ မွေးသမိခင်ကြီး ( Mother of All Revolution ) သမတက ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကိုသွားတယ်ဆိုတာက မြန်မာပြည်ရဲ့ အပြောင်းလဲကို အသိမှတ်ပြုခဲ့တယ်ဆိုတာကို ပြသနေကိုး။
အချိန် ( Time)
အမေရိကန် သမတ လာတော့ အမေရိကန် တွေစိတ်နေစိတ်ထားကို
သိထားဖို့ လိုပါတယ်။ အမေရိကန် တွေဟာ ဘောလုံးပွဲ ( Football ) ကိုမကြိုက်ဘူး။ မကြည့်ဘူး။ မသိဘူး။ အိုလံပစ်မှာသူတို့ အသင်းနိင်သလား
ရှုံးသလား၊ သွားကန် သလား သွားမကန် ဘူးလားသူတို့ မသိဘူး။ ဒါပေသိ
အမေရိကန် တွေဟာ ဘစ်စကက်ဘောလ်ကို သိပ်ကြိုက်တယ်။
ဘာကြောင့် လဲ ။ ဘောလုံးဟာဂိုးတဂိုးရဖို့ သိပ်ကြာတယ်။
ဘစ်စကက်ဘောဟာ ဂိုးရဖို့ သိပ်မြန်တယ်။ ဘောလုံးက တပွဲမှာ ဂိုးအရေတွက်ဟာ အလွန်ဆုံးမှာ ၆ ဂိုး ၇ ဂိုးပေါ့။ ဘစ်စကက်ဘောက ဂိုးအရေအတွက် ၄၀ ကျော် ၅၀ ရကြတယ်။
ဒီတော့ အမေရိကန် တွေဟာ မြန်တာကိုကြိုက်တယ်။ များများရတာကိုကြိုက်တယ်။ ကလေးဆန်တယ်လို့ ခင်ဗျားပြောလုို့ ရပါတယ်။
အမေရိကန်တွေဟာ ကလေးတော့ကလေး ဒါပမဲ့ ဧရာမ ကလေးကြီးဖြစ်နေတယ်။ ကိုယ်ကိုဒုက္ခကောင်းကောင်းပေး နိင်တဲ့ချာတိတ်ကြီးဖြစ်နေတယ်။ သတိထားရမယ်။
ဒါကြောင့်မြန်မာပြည်က အပြောင်းလဲကိုအချိန်ဆွဲနေတာကိုသိပ်မကြိုက်ဘူး။
အချိန်မဆွဲ နဲ့မြန်မြန်ပြောင်းနိင်လေ ဦးသိန်းစိန်အမှတ်ရလေ။
လူထု တွေအတွက်ကောင်းလေးပဲလို့ အကြံပေးချင်တယ်။
အမေရိကန် တွေဟာ အကြပ်ရိုက်နေပြီ။ ဗိုက်နာနေတယ်။ စီးပွားပျက်နေတယ်။ တရုပ် နဲ့အမေရိကန်ကိုလဲ ချိန်ခွင်ညှာညိထားလိုက်မယ်
စတဲ့ စဉ်းစားချက်တွေကလဲ အမေရိကန်အတွက် မထိခိုက်နိင်ပါဘူး။ ဒီလိုစဉ်းစားလိုက်ရင်တော့ ကိုယ်အတွက်ပဲထိခိုက်နိင်တယ်။
ဒါတွေက သူပြသနာ။ သူပြသာနာကိုသူရှင်းနိင်တယ်။ ရှင်းနိင်တဲ့အနေထားသူမှာရှိနေတယ်။ ဘာဖြစ်လိုလဲဆိုတော့တရုပ်ကို ရင်ဆိုင်ဖို့ အမေရိကန်ဟာ အရှေ့ အာရှ တခုလုံးသူအိပ်ထဲမှာရှိနေတယ်။
တရုပ်ကို ၀င်ဖို့ လက်တကမ်းအတွင်းမှာရှိတယ်။ လီဒိုလမ်းမထက်တရုပ်ရဲ့မဟာဗျုဟာတွေကိုထိမ်းချုပ်နိင်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေသူမှာရှိနေတယ်။ တရုပ်အသက်သွေးကြောဖြစ်တဲ့စွမ်းအင်ကုိုထိမ်းချုပ်နိင်ဖုို့
အရှေ့ အလယ်ပိုင်းဟာသူလက်ထဲမှာပဲဖြစ် နေတယ်။
အမေရိကန် သမတရွေးကောက်ပွဲမှာ သမတလောင်းနှစ်ဦးစလုံးက
အမေရိကန် တွေကိုအန္တရယ်ပေးနိင်တဲ့သူဟာ ဘယ်သူတွေလဲလို့ 
တွက်ထားကြတယ်။ အိုဘားမားကရုရှားလို့ မြင်တယ်။ မစ်ရောနီက နယူးကလီးယားအီရန်လို့ တွက်တယ်။ ဒါကြောင့် အမေရိကန်အတွက် တရုပ်ဟာ မမှုလောက်သေးဘူးလို့ ယူဆလို့ ရတယ်။
ကမ္ဘာဆူပါပါတွေဟာချန်ပီယံရွှေခါပတ်ကိုအနည်းဆုံးနှစ်ပေါင်း ၂၀၀ ကျော်ထိမ်းသိမ်းသွားကြတဲ့သမိုင်းကြောင်းရှိတယ်။ ( ရောမ၊မွန်ဂို၊အော်တိုမန်၊ ဗြတိသျ အင်ပါယာ) ။ အမေရိကန် ကမ္ဘာချန်ပီယံရွှေခါးပတ်ကို ရထားတာ ၂၄ နှစ်မျှသာရှိသေးတယ်။
ဟုတ်ပါတယ်။ အမေရိကန် စီးပွားရေးဟာ Recession ထဲရောက်နေတယ်။
ဒါပေမဲ့ ဒါဟာအမေရိကန် အတွက် ဘာမှာမဖြစ်နိင်သေးဘူး။ သူပြသနာတွေ
ကိုယ် က ကိုယ်ပြသနာကိုကိုယ်ဖါသာကိုယ်မရှင်းနိင်ဘူး။ အမေကယ်ပါ၊အဘကယ်ပါ အခြေအနေမှာရှိတယ်။
တစ်။ ဦးသိန်းစိန်ဟာ ဦးနု ၊ ဦးနေ၀င်းနဲ့ဦးသန်းရွှေအမှားမျိုး မလုပ်ဖို့ ။
နှစ်။ အမေရိကန် နဲ့နိင်ငံရေး၊စီးပွားရေး နဲ့ ဒေသဆိုင်ရာလုံခြုံရေးတွေမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက် ဖို့ပါပဲ။
သုံး ။ ဦးနုအမှားမျိုးထပ်မမှားမိဖို့။
ဦးသိန်းစိန်အတွက် သားရွှေအိုထမ်း တဲ့ကိန်း ဆိုက်ပါစေလို့ ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်။
( မိုးသီးဇွန် )
Aright, That's Right,
Not too early, not so late
For give and not forget but
Stay in the present and move on.
Thank you very much for your good contribution, Ko Moe Thee.
Do not mention about U Nu,
Do not compare U Nu with NE WIN.
NE WIN is the worst evil in Burmese History.
NE WIN , the FIRST HAND TEACHER of Military gangster,
"The Fire" he ignitedi in 1962 is still kept burning the country withagreat acceleration and momentum for 50 years.
Even the fire of Hitla (Germany) ended within5years only.
but the fire of NE WIN is kept burning not only the country but also the MORAL of new generation of Military Officers as well as government Officers.
Because new generation of Military Officers keep following up his style,practice,system and policy for 50 years.
Now the country is badly almost damaged.
50 years of debt !!!
The worst condition ofacountry in the world.
NE WIN,AUNG GYI,SAN YU,SEIN LWIN,KHIN NYUNT,THAN SHWE,MAUNG AYE,THEIN SEIN
ALL JUNTA,GANGSTERS,who put our country into the poorest in the world by setting up all wrong systems for 50 years.